Iindaba - Umenzi weoksijini wePSA udlala indima ebalulekileyo kwimizi-mveliso
Umenzi weoksijini wePSAisebenzisa i-zeolite sieve yeemolekyuli njenge-adsorbent, kwaye isebenzisa umgaqo woxinzelelo lwe-adsorption kunye nokudodobala koxinzelelo kwi-adsorb kunye nokukhupha i-oksijini emoyeni, ngaloo ndlela yahlula ioksijini kwizixhobo ezizenzekelayo. Ukwahlulwa kwe-O2 kunye ne-N2 nge-zeolite sieve yemolekyuli kusekwe kumahluko omncinci kububanzi obunamandla beegesi zombini. Iimolekyuli ze-N2 zinenqanaba lokusasazeka okukhawulezayo kwii-micropores ze-zeolite sieve yeemolekyuli, kunye nee-molecule ze-O2 zinenqanaba lokusasazeka kancinci. Ngokukhawulezisa okuqhubekayo kwenkqubo yokwenza amashishini, ibango lentengiso leIijenali ze-oksijini zePSA Iyaqhubeka ukwanda, kwaye izixhobo zidlala indima ebalulekileyo kwimizi-mveliso.
I-Hangzhou OuRui Air Separation Equipment Co., Ltd.yingcali umenzi wokwahlulwa komoya kwe-cryogenic, IVPSA isixhobo sokuvelisa ioksijini, isixhobo esicocekileyo sokuhlanjululwa komoya, imveliso ye-PSA nitrogen, isixhobo semveliso yeoksijini, isixhobo sokucoca i-nitrogen, inwebu yemveliso yokwahlula initrogen kunye nesixhobo semveliso yeoksijini, yombane. Umoya vana vana. Ulawulo vana ubushushu. Sika amashishini okuvelisa ivelufa.
1. Malunga nokusetyenziswa komvelisi weoksijini kwicandelo lomlilo otyetyisiweyo weoksijini
Umxholo weoksijini emoyeni yi -21%. Ukutsha kwepetroli kwiibhoyili zeshishini kunye neekilns zeshishini nako kusebenza phantsi kwalo mxholo womoya. Ukuziqhelanisa kubonise ukuba xa isixa seoksijini kwigesi yebhoyila sifikelela ngaphezulu kwe-25%, ukonga umbane kuphezulu njenge-20%; Ixesha lokufudumeza ukuqala kwebhoyile lifutshane ngo-1 / 2-2 / 3. Ukutyebisa ioksijini kukusetyenziswa kweendlela ezibonakalayo zokuqokelela ioksijini esemoyeni, ukuze umxholo wokwenza ioksijini kwigesi eqokelelweyo yi-25% -30%.
2. Malunga nokusetyenziswa komvelisi weoksijini kwicandelo lokwenziwa kwephepha
Ngokuphuculwa kwelizwe kweemfuno zokukhusela okusingqongileyo kwiinkqubo zokwenza iphepha, iimfuno zempuphu emhlophe (kubandakanya umgubo wokhuni, umgubo wengcongolo, kunye ne-bamboo pulp) ziyanda. I-klorine yoqobo eyenziwe ngomgubo wemveliso yempuphu kufuneka iguqulwe ngokuthe ngcembe ibe ngumgca wemveliso yempuphu engena klorine; Umgca wokuvelisa umgubo omtsha ufuna inkqubo ye-chlorine-free, kwaye i-pulp bleaching ayifuni i-oxygen ephezulu. Ioksijini eveliswa luxinizelelo lwe-adsorption oxygen generator ihlangabezana neemfuno, ezoqoqosho kunye nokusingqongileyo.
3. Malunga nokusetyenziswa komvelisi weoksijini kwicandelo lokunyibilikisa okungekho kwentsimbi
Ngolungelelwaniso lobume bezemveliso zikazwelonke, ukunganyibiliki okungenantsimbi kuye kwavela ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo. Abavelisi abaninzi sele beqalisile ukusebenzisa uxinzelelo kwi-swing adsorption yejenreyitha kwinkqubo yokuhamba kweoksijini ezantsi evuthela ilothe, ubhedu, i-zinc, kunye ne-antimony, nakwisinyibilikisi esisebenzisa ioksijini leaching yegolide kunye neickel. UkusetyenziswaIntengiso yomvelisi weoksijini wePSA yandisiwe.
Umgangatho wesisefu seemolekyuli esisetyenzisiweyo Umenzi weoksijini wePSAithatha indawo enkulu. Isihlunu seMolekyuli sisiseko soxinzelelo kwi-adsorption. Ukusebenza okuphezulu kunye nobomi benkonzo yesisefo seemolekyuli kunempembelelo ethe ngqo kuzinzo lwesivuno kunye nococeko.